Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Lady Bug စက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် Lady Bug စက်ဘီးဘဲလ် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. ကြေးစားဖြစ်ပါသည် Lady Bug စက်ဘီးဘဲလ် အဘယ်သူ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန် standard နှင့်ပြည်ပသို့တင်ပို့ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်လည်းဒေသခံစျေးကွက်များတွင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးကောင်း, အကျိုးရှိစွာန်ဆောင်မှု, ငါတို့ကုမ္ပဏီအစွမ်းကုန်ဂိုးအဖြစ်ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှု၏လေးနက်သောသဘောထားကပါစေ။ customer များစိတ်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်အဖြစ်, သင့်လျော်တဲ့စျေးနှုန်းနှင့်အတိုခဲ-အချိန်အစာရှောင်ခြင်းပေးအပ်ခြင်းမှာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုလက်ခံရရှိစိတ်ချကြသည်။ ကျနော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေဖို့မျှော်ကြည့်ရှုပါ။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သင့်ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်အမိန့်ကြိုဆိုပါတယ်။
ပုံစံ - JH-505G/JH-505R/JH-505Y
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10/သတျတော,200pc/ctn.,2.2 cuft N ကို.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:၈ ကီလိုဂရမ်
ပစ္စည်း-ကျွန်ုပ်တို့၏ ladybug စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုအလူမီနီယံနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလွန်အကြမ်းခံသောအင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ကြာရှည်အသုံးခံသည်.
ကာတွန်းဒီဇိုင်း-စတိုင်ကျသောအသွင်အပြင်နှင့်အတူစက်ဘီးလက်ကိုင်လက်စွပ် ဦး ချို,အဲဒါ’သင်၏စက်ဘီးကိုအလှဆင်ရန်အလွန်ကောင်းသည်,မိန်းကလေးများအတွက်စံပြ’၎,ယောက်ျားလေး’၎,ကလေးငယ်’၎,ကလေးများ’စက်ဘီး
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-အတွင်းအချင်းတပ်ဆင်မှုအတွက်အများဆုံးအချင်း:0 အကြောင်း.၉၁ လက်မ.လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်း,ဝက်အူလှည့်ဖြင့်လက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်ပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/lady-bug-bike-bell.html
Lady Bug စက်ဘီးဘဲလ် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ Lady Bug စက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ Lady Bug စက်ဘီးဘဲလ် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan